Easy Packers and Movers Nepal:Home, Flat, Office Shifting in Kathmandu"इजी प्याकर्स तथा मुवर्स नेपाल तपाईको सेवा मा तत्पर छ।" - Easy Packers and Movers Nepal
कोठा, अफिस, फ्ल्याट, घर तथा सम्पूर्ण प्याकिङ र सिफ्टिङको सामान कुनै एक ठाउॅबाट अर्को ठाउॅमा सार्नु भनेको त्यति सहज कार्य होइन्। तर सहज कार्य होइन भन्दैमा समस्या टर्ने पनि त होइन। त्यसको सामाना त अवश्य गर्नै पर्ने हुन्छ।
त्यसमा अझ आफ्ना बहूमूल्य सामानको सुरक्षा हुने हो कि, होइन? अमूल्य सामान टुट-फूट हुने पो हो कि, त्यस्तै एक ठाउॅबाट अर्को ठाउॅमा पु₹याउनु पर्ने सडक-बाटो सहज हुने हो कि होइन? मानिसको बढ्दै गइरहेको व्यस्त जीवन शैली, भिडभाडलाई हामीले डटेर सामना गर्नु पर्दा आफ्ना सर-सामान सार्नु पर्ने कुरालाई लिएर कतै तपाइ हैरानी त हुनुहुन्न???
यदि त्यसो हो भने हामीलाई फोन डायल गर्नुस् र यी हैरानी बाट छिट्टै मुक्त हुनुस्।
किनकि, यी र यस्ता विविध समस्याको समधानका निम्ति विगत लामो समय देखि गुणस्तरीय सेवा, सुविधा, प्याकिङ-सिफ्टिङ र ओसार-पोसारमा हामी तपाइलाई सक्दो सहयोग गर्दै आइरहेका छौ। र आगामी दिनमा पनि पूर्ण रूपमा सेवा गर्नेछौ। तपाई- लाई अति सहजता प्रदान गरी सहयोग गर्नु इजि प्याकर्स तथा मुवर्स नेपालको मुख्य उदेश्य तथा कर्तव्य भित्र पर्दछ।
जस अन्तर्गत सस्तो, सुलभ, भरपर्दो, अनुभवी तथा दक्ष कामदारबाट घर एक ठाउॅबाट अर्को ठाउॅमा, अफिस एक ठाउॅबाट अर्को ठाउॅमा, कोठा-फ्ल्याट, होस्टेल एक ठाउॅबाट अर्को ठाउॅमा सार्नु परेमा तुरून्त हामीलाई सम्झनुहोस्। – हामी तपाईको सेवामा तत्पर छौॅ।
– हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै तपाईको सेवा गर्नु हो।
– सस्तो, सुलभ र भरपर्दो माध्याम।
– दक्ष तथा अनुभवयोग्य कामदार।
– तपाईको बहूमूल्य सामानको सूरक्षा।
– तपाइले रोजे जस्तो अनि खोजे जस्तो।
“:-तपाइको आवश्यक अनुसारको लोकेशनमा तुरून्तै हामी आइपुग्ने छौ।”